iCloud haizoenzanise Safari tabo pane yangu Mac | Ndinobva mac
ICloud haizoenzanise Safari tabo pane yangu Mac
Kunyangwe kune vakawanda kuwiriranisa kwe ICloud Icho chechipiri, kune avo vedu vane akati wandei Apple zvishandiso, chokwadi chekuti iCloud gore rinoshanda zvakaringana chiri kuwedzera kudiwa uye ndechekuti, semuenzaniso kwandiri, ini ndinongoshandisa zvangu iPad, iPhone neMac uye nekudaro ndinoda iyo shanduko dzandinoita pane imwe yeaya madhizaini kuti ndivepo paneangu mamwe majaira nekukasira.
Chimwe chezvinhu chandinoda kuve muchienderana nguva dzese ndiwo iwo matabhu andinogadzira pane ese mairi. Newe iwe watoziva kare, kwenguva yakati rebei aya mabhatani akave akaenderana neumwe neumwe kuburikidza neICloud gore. Nekudaro, pane dzimwe nguva apo kuwiriranisa kunomira uye unofanirwa kumanikidza resynchronization.
Ramba uchifunga kuti kana iwe ukaona kuti maTabhu eSafari pane ese maMac uye iOS haasi kuwiriranisa zvinogutsa, zvinogona kunge zviri chiratidzo chekuti unofanirwa kumanikidza kuwiriranazve kwedata reSafari. Kugona kuita izvi iwe unofanirwa kuzvibata muICloud pani pa System Zvaunofarira> iCloud> Safari.
MuICloud hwindo iwe unozogona kuona ese ehurongwa zvinhu zvinowirirana negore. Pakati pavo pane chinhu cheSafari chinofanira kusarudzwa mubhuruu. Kuve nesystem yekuita resync yeSafari data neICloud unofanirwa kusarudza chinhu chacho, mirira maminetsi mashoma nacho chakaremara wochisarudza zvakare.
Panguva iyoyo iwe uchaona maratidziro eSafari pane ese Mac yako uye Safari yeIOs achagadzirisa nekuratidza ruzivo rwakafanana pane ese mapuratifomu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS Sierra » ICloud haizoenzanise Safari tabo pane yangu Mac
Spotify anotiza kubva kuApple Music uye anosvika mamirioni makumi mashanu evashandisi